विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)ले दोस्रो महामारीका लागि तयारी रहन चेतावनी जारी गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण उत्कर्षमा पुगेका बेलामा डब्ल्युएचओ प्रमुख डा. टड्रोस अधानामले सोमबार संसारभरका मानिस दोस्रो महामारीका लागि तयारी रहन चेतावनी जारी गरेका हुन् ।
दोस्रो महामारी पूर्व नै सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो लगानीका लागि उनले संसारभरका सबै देशलाई आग्रह पनि गरेका छन् । त्यसो नभएमा विश्वमा दोस्रो महामारीले कोरोनाभन्दा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने उनको भनाइ छ । डा. टेड्रोसले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संसारभर २ करोड ७१ लाख मानिस संक्रमित भएको र झण्डै ९ लाख मानिसले ज्यान गुमाएको बताएका छन् ।
सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि देखिएको कोरोना भाइरसले अहिलेसम्म कतिपय देशमा भयावहको अवस्था निम्ताएको बताउँदै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न नै ठूलो समस्या पर्ने अवस्था देखिएको बताएका छन् । एजेन्सी
हरिवंशको हराएको चिनामा कतै न कतै मेरो नाम पनि पक्कै लेखिएकै हुनुपर्छ: मदनकृष्ण श्रेष्ठ
कोरोना संक्रमणबाट आज मृत्‍यु हुनेहरुको बिवरण